विवाह भएको चार वर्ष पुरा भयो । साधन
हाम्रो विवाह भएको चार वर्ष पुरा भएको छ । परिवार नियोजनको साधन पनि प्रयोग गरेकी छैन । तर बच्चा हुन सकेको छैन । के कारण ले यस्तो हुन्छ ? –
एजेन्सी – यौनसम्बन्धको दौरानमा मानिसहरु प्राय कन्डमको प्रयोग गर्ने गर्दछन्। कन्डमको प्रयोग गर्नु यौनसम्पर्कको लागि सबैभन्दा सुरक्षित मानिन्छ। यसलाई यौन यो निश्चित समयको लागि उपयुक्त अनि गर्भनिरोधकको अचुक औषधि पनि
नक्कली अर्थात् प्लाष्टिकको चामल आइरहेको बारे समाचारमा सुन्नुभएको होला जुन स्वास्थ्यका लागि निकै हानिकारक हुने गर्दछ । जब तपाईँले नक्कली चामल देख्नुहुन्छ तब हेरेर नै उक्त चामल नक्कली हो कि
सावधान ! तपाईंलाई पुरुष ग्रन्थीसम्बन्धी समस्या हुनसक्छ
काठमाडौँ, जेठ २९ । के तपाईंलाई पिसाब छिटोछिटो लाग्ने, पोल्ने, पिसाब गर्दा धारा छुटने, मसिनो हुने धारा छुट्दा छरिएर जाने, अण्डकोष सुनिने, गनाउने, नाइटोमुनि दुख्ने, वीर्य खस्दा पोल्नेजस्ता समस्या छ
भक्तपुर २५ जेठ । भक्तपुर अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले आफूले भक्तपुरका पत्रकारलाई अभद्र व्यवहार गरेको स्वीकादैं कार्यक्रम स्थलमै माफी मागेका छन् । भक्तपुर अस्पतालले आयोजना गरेको एक कार्यक्रमको
मानध्वज लामा\_ काठमाडौं, २३ जेठ गत आइतबार आँखा विस्फोट भई सिकिस्त बिरामी परेकी रोस्कोट नगरपालिका–७, कालिकोटकी चार बर्षीया बालिका मनसरा लुहारको उपचार कान्ति बाल अस्पतालमा शुरु भएको छ ।
स्तन क्यान्सर : डा. रवीन्द्र पाण्डे
स्तनका कोषहरू असामान्य रूपमा वृद्धि हुन थालेपछि स्तन क्यान्सरको सम्भावना हुन्छ। साधारणतया कोषहरूको वृद्धि र विभाजन शरीरको आवश्यकता अनुसार हुन्छ। तर, जब शीघ्र रूपमा र धेरै मात्रामा कोषहरू वृद्धि र
१. सरसफाई : समय/समयमा नुहाइदिने, नङ/कपाल काटिदिने, सफा कपडा लगाइदिने, औंला चुस्न नदिने, खाना खाँदा वा मुखमा हात राख्नु अघिं राम्रोसँग हात धोइदिने, सफा बिस्तारा प्रयोग गर्ने आदि सजगता अपनाउँदा
उखुको जुस पिउदै हुनुहुन्छ ?ध्यान दिनुहोस यी ७ कुरा नत्र ज्यान जाला !
गर्मीका बेला हामी प्रायजसो उखुको रस पिउँछौं । यसले आँतलाई शितल बनाउँछ । यसका कयौं फाइदा छन् । जण्डिसको समस्यामा यसको फाइदा निकै हुन्छ । गर्भवती महिलाका लागि यो उत्कृष्ट
तौल बढ्न नदिन यसरी खानुहोस
खाना घटाएर वजन घटाउने खोज्छन् धेरैले । तर, यो गलत तरिका हो । किनभने यसो गर्दा शरीरका लागि चाहिने न्युनतम तत्वको समेत अभाव हुने खतरा हुन्छ । वजन घटाउन खाएको
हिमाल पोष्ट\_ काठमाडौं, २९ बैसाख आज मे १२ अर्थात नर्सिङ आन्दोलनकी जन्मदाता सेवामूर्ति फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलको जन्म भएको दिन । नाइटिङ्गेलको सम्झनामा संधैका बर्षहरुमा झैं यो बर्ष पनि विश्वभर उनको
पुष्पा गैरे \_वैशाख २५ अर्घाखाँची अघोसित लोडसेडिङ कारण अन्धकारमय अस्पताललाई उज्यालो पार्न आफ्नो गाँस काटेर सहयोग गर्न महान कार्य गरेका छन अर्घाखाँचीका प्रदेशी सपुतहरुले। पटकपटक बिजुलि जादा अप्रेसन गर्दागर्दै रोकिनु